Xukuumada Soomaaliya oo soo furatay lahaystayaal u kala dhashay wadamada Siiriya iyo Sirilaanka. – Radio Daljir
Xukuumada Soomaaliya oo soo furatay lahaystayaal u kala dhashay wadamada Siiriya iyo Sirilaanka.
Janaayo 4, 2013 11:09 b 0
Moqdisho, 04, Jan, 2013 – Shir Jara?id oo uu galabta ku qabtay Ra?iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya xafiiskiisa Mudane Cabdi Faarax Shirdoon ? Saacid? ayaa wuxuu faafaahin ka bixiyey la haystayaal u kala dhashay wadamada Siiriya iyo Sirilaanka oo mudo ka badan labo sano afduub ay u haysteen Burcad badeed Soomaali ah.
Dadaal dheer oo ay iska kaashadeen Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Agaasimaha Hay?ada Nabad Sugida Qaranka Mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa lagu guulaystay lahaystayaashaan oo kala ah Ibraahim Cabdalle Jowri oo ah Kabtanka Markabka Orna, Axmed Cabdalla oo ahaa Enjineerka Markabka iyo Sarath Chandra oo ka tirsanaa shaqaalaha Markabaka in si nabad galyo ah looga soo daayo burcad badeedii haystay.
Ugu horayntii Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya ?Saacid? ayaa u mahadceliyey Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaran iyo Hay?ada Nabad Sugida, dadaalkii dheeraadka ahaa ee ay ku bixiyeen sidii xorrnimadooda u heli lahaayeen dhibanayaashaas.
?Dadaal dheer oo ay xukuumaddu qaaday waxaan ku guulayanay in dad walaaheen ah oo mudo dheer ay burcad badeed gacanta ku haysay ay dib u helaan xornimadooda. Waxaan rabaana inaan halkaan ku sagootino si ay dadkoodii iyo dalkoodii ula qaybsadaan farxada, islamarkaasna ugu muujino caalamka sida ay nooga go?antahay in xukuumadu aysan marnaba raali ka ahayn in dad aan waxba galabsan la afduubto. Sidoo kale xukuumaddu waxaa ay isku howlaysaa sidii ay uga hortagi lahayd falalka burcad badeednimada ah ee mararka qaar ka dhaca biyaha Soomaaliya.Sida aan la socono waxaa kaliya oo Burcad Badeeda loga guulaysan karo waa in caalamku la garab istaago taageero caalami si looga sifeeyo dhulka ku teedsan xeebaha? ayuu yiri Ra?iisul Wasaaruhu.
?Lama soo koobi karo farxad aan maanta dareemayo, waxaan afduubnaa mudo labo sano ah runtii aad ayaan u wel weli jiray lakiin dadaalka ay dowladdu u gashay sii dayntayda waxaan oran karaa inay tahay mid i hilmaansiisay wixii dhib ahaa oo isoo maray, xataa burcad badeedii i haystay mudadaas waan iska cafiyey maanta madaama ay dowaladda Soomaaliya si wanaagsan noo soo samata bixisay?
Ugu danbayntii Ra?iisul Wasaare ?Saacid? ayaa ugu baaqay kooxaha burcad badeedka ah inay ka haraan falalkan xun oo ay gacamaha kula jiraan taas oo u soo jiiday dalkeena sumcad xumo, waxaan sidoo kale ugu baaqay kooxahaas dadka aan waxba galabsan oo u afduuban inay si shuruud la?aan ah ku siidaayaan.
Amal Gaalkacyo oo yeelatay maamul cusub, (Sawirro).
(Dhagayso) Barnaamijkii Martisoor wariye_Axmed_Sh._Maxamed_(Tallman)